true investigations /zu-ZA/tools-for-life/investigations/steps/investigation-and-its-use.html read 1 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/investigations_zu_ZA.jpg Uphenyo
Uyemukelwa kwi-Online Course YezoPhenyo
Abantu abaningi bachitha isikhathi bezama ukuthola ukuthi kungani bengaphumeleli noma ukuthi kungani izinkinga zabo zibonakala zingapheli noma kungani amanye amaphrojekthi abo ethuthuka kodwa amanye engaphumeleli. Umphumela uba ukuqagela okuningi nemiphumela embalwa kakhulu. Ngaphandle kokwazi ukuthi ungaphenya kanjani ngempela futhi uthole amaqiniso eqiniso, umuntu akanalo ithuba langempela lokuthola ukuthi yini okungalungile noma eza nezisombululo ezifanele.
Obekungekho kuyindlela yokwenza uphenyo olunembile. Ezimweni eziningi, uma umuntu engaqondi okuthile, angakwazi ukwamukela incazelo yokuqala ayitholayo noma ngabe kunephutha kangakanani. Ngenxa yalokhu, azikho izindlela zangempela zokwenza uphenyo ezazenziwe. Kodwa ke, u-L. Ron Hubbard wenza intuthuko emqondweni (isihloko sokubonisana). Kulokhu kuqubuka kuye kwaba nentuthuko yakhe yendlela yokuqala ephumelelayo yokucinga nokuthola izimbangela zangempela zezinto.
Ukwazi ukuthi ungaphenya kanjani kukunika amandla wokuhlaziya wonke amaqiniso ahlukahlukene nemibono futhi uthole izizathu zangempela zokuphumelela noma ukwehluleka kunoma iyiphi indawo yempilo. Ngokuthola ngempela ukuthi kungani izinto zinjalo, uzokwazi ukulungisa nokuthuthukisa isimo—noma yisiphi isimo. Lokhu ubuchwepheshe obubaluleke kakhulu kubantu kunoma yiluphi uhambo lwempilo.
Kusuka kusuku nosuku nakwisonto ngesonto, umuntu angabhekana nezimo eziningi ezingemnandi empilweni yakhe. Ngandlela thile yena uyakwazi ukudlula kulezi zikhathi, eqiniseka ukuthi akukho okuningi angakwenza ukuthuthukisa impilo yakhe. Mhlawumbe iphrojekthi ehlelelwe izinyanga emsebenzini ayiqhamuki nempumelelo elindelekile, umkhiqizo osehhovisi wehle kakhulu ezinyangeni ezimbalwa ezedlule noma ukwengezwa kwendlu yakhe kuthatha isikhathi eside kunalokho obekuhleliwe ekuqaleni. Izinto ezikanje ziyenzeka futhi ziyizinto ezijwayelekile kwiningi lethu.
Kepha lezi azidingi ukuba yizinhlobo ezijwayelekile zokuhlangenwe empilweni yakho. Ungaphila impilo ejabulisayo futhi ufeze izinhloso zakho kunoma iyiphi ingxenye yempilo—ngokwakho, nomndeni wakho, umsebenzi noma umphakathi wakho. Izinhloso ozicabangele wena uqobo zingafezeka.
Uma izinhloso ezinjalo zingafinyelelwanga noma uma usesimweni esande saba sibi kakhulu, kunembangela yangempela yalokhu engatholakala. Imvamisa, lo mbono uvame ukungaqapheleki kubantu—izinto empeleni zinembangela. Azenzeki nje. Kunezizathu ezibanga izimo ezingathandeki noma ezinzima—izizathu ongenza okuthile ngazo.
Ngaphandle kokwazi lokhu, uMuntu uvame ngokuya kwinkolelo yokuthi umlingo noma inhlanhla inamandla okuba nethonya empilweni yakhe, noma ubheke ukufunda izinkanyezi ukuthola ikusasa lakhe, empeleni ecabanga ukuthi ukuhamba kwamaplanethi nezinkanyezi kungamtshela ukuthi yini ezokwenzeka empilweni yakhe. Akukho kulokhu okususelwa emcabangweni noma olwazini. Abantu abaningi bathembela nje ngeze (kungenzeka ukuthi babe nomphumela ofiselekayo) ukuthi akukho lutho oluzophatha kabi noma bazikhohlisa ngenkolelo yokuthi impilo umzabalazo futhi “impilo injalo.”
Isibonelo, umlimi obe nesitshalo esimpofu kakhulu onyakeni akanayo incazelo yaso. Akanalo ulwazi lokuthi nguyena uqobo obangele lesi simo. Kodwa ke, uma ubungabheka kuyo, uzothola ukuthi umlimi ngaphambili wehlulekile ukugcina imbewu iphephile ekutshaleni kwentwasahlobo, futhi ngenxa yalokho imbewu ilinyazwe izinambuzane. Engakuboni lokhu, angaqhamuka nazo zonke izinhlobo “zezizathu” noma asole nje inhlanhla embi.
Nasi esinye isibonelo. I-factory enomkhiqizo ophansi, umphathi unyakazisa abasebenzi, uqasha abasebenzi abasha, njll., ngomzamo wokukhulisa umkhiqizo ngaphambi kokuthi i-factory iqothuke. Kepha umphathi angahle angabi nawo amakhono adingekayo okuhlola ngempela ukuthi ifemu isebenza kanjani ukuthola imbangela yangempela yomkhiqizo ophansi. Uma uhlola i-factory, ungathola ukuthi abahlinzeki bemikhiqizo yayo eluhlaza benqabile ukuletha ngoba ihhovisi elisingatha izindaba zezimali ze-factory belingakhokhi izikweletu.
Ukubheka, ukuphatha futhi uthuthukise noma yisiphi isimo esinjengalesi kunoma iyiphi indawo yempilo kudinga ikhono ophenyweni—amandla okucabanga ngendlela enengqondo bese ufinyelela kwimbangela yangempela yenkinga.
Ukuphenya kungukutholakala ngokucophelela nokuhlungwa kwamaqiniso. Ekuphenyeni, uphenya futhi uhlole imininingwane yokuthile uzama ukuthola amaqiniso, ikakhulukazi emzameni wokuthola imbangela.
Lapho wenza uphenyo olufanele, uthola imbangela yangempela yenkinga obhekene nayo. Isibonelo, kunoma iyiphi inhlangano, ungabona ukuthi ukukhiqizwa kwayo bekuphansi. Lesi akusona isimo esihle futhi kufanele siphenywe bese kutholakala imbangela. Uphenyo lungasetshenziswa futhi empilweni yakho ukuze uthuthukise izimo.
Lapho wenza uphenyo, kufanele uzibuze lombuzo, “Yini engingayiqondi?” maqondana nemibandela ekhona ofuna ukuyisingatha. Uzothola ukuthi amaqiniso amabili awavumelani—okusho ukuthi ahlukile futhi enza ukuthi kungenzeki ukuthi abe yiqiniso—ukuze ungawaqondi. Ngakho ke uzama ukuthola umqondo ngala maqiniso amabili: ubuza la maqiniso amabili futhi uzothola elinye iphuzu ongaliqondi. Futhi lapho uzama ukuqondisisa leli phuzu, manje uzothola elinye iqiniso ongaliqondi. Futhi kwenye indawo endleleni, uzothola isizathu sangempela noma imbangela yezimo oziphenyayo.
Noma yiluphi uphenyo kufanele luthuthuke ngale ndlela—ukuqhubeka kokubuza imibuzo njalo lapho okuthile kungaqondakali. Kwesinye isikhathi imibuzo eminingi kufanele ibuzwe, kwesinye isikhathi kuthatha kuphela ukuthi “Uyini lowo msindo?” ukukuholela kwi-source yobunzima. Nasi isibonelo sophenyo olwenziwe ngokushesha ngenxa yesimo esiphuthumayo: Unjiniyela usemsebenzini kwigumbi lenjini yomkhumbi. Njengoba esengunjiniyela iminyaka eminingi, usebenzisa isipiliyoni sakhe lapho ebuka indawo yakhe. Yena uzwa umsindo wokuhlwaya obekungafanele ube lapho—okuhlukile kulokhu izimo ezijwayelekile ezisegunjini lenjini. Ubheka ngokushesha lendawo futhi akaboni lutho olungajwayelekile ngaphandle kwefu elincanyana elimhlophe. Unjiniyela uhlanganisa lokho akubonayo nalokho akuzwayo futhi aqonde efwini elimhlophe ukuthola ukubukeka okungcono. Ubona i-valve isiphukile ngakho ke uvala umugqa wesitimu (uhlelo lwamapayipi aphethe umusi wokushisa namandla emkhunjini). Ukuhlikiza kuyayeka.
Ngamazwi ambalwa, (a) uthola ingxenye engasebenzi kahle yenhlangano noma yini oyiphenyayo bese (b) uthola okuthile ongakuqondi ngakho bese (c) ubuza imibuzo yabantu leyo ndawo exhunywe nenkinga noma ubheka endaweni ukuthola imininingwane eminingi.
Ngokulandela lezi zinyathelo ngokulandelana, uzothola imbangela yenkathazo engaxazululwa ngakho-ke indawo isebenza kahle futhi. Enhlanganweni, ungazisebenzisa lezi zinyathelo ezintathu ngokuphindaphindiwe, futhi ngokuvamisile kuzokwanela ukuyigcina isebenza kahle kakhulu.
Izibalo zokubonisa isimo (inombolo noma inani eliqhathaniswa nenombolo yangaphambilini noma inani lezinto ezifanayo) zibamba iqhaza ophenyweni. Isibalo sikhombisa ukukhiqizwa kwento eyenziwayo, indawo noma inhlangano, ngokuqhathaniswa nesikhathi sangaphambilini. Kukhombisa ukuthi le ndawo iyayifeza yini i-purpose yayo—uma izibalo zanda, kufezekisa kakhulu lokho okuhloselwe indawo ngoba izinto kufanele zikhule, zingabi zincane kunoma iyiphi inhlangano.
Ekwenzeni uphenyo, ubheka izibalo eziyehlayo (ziya ngokuya zincipha). Lezi azenzi mqondo, kunjalo, ngakho-ke kumele ubuze abantu ababhekele ukukhiqizwa okulawulwa yizibalo zokubonisa isimo. Ezimpendulweni zabo kuzoba nokuthile okungenzi umqondo kuwe—ngokwesibonelo, bangathi “Ngeke sikhokhe izikweletu ngoba u-Josie ubelokhu ethatha isikhathi engekho emsebenzini enza izifundo.” Ufuna okuthile okungenangqondo kuphela. Ngakho ke ubuza umuntu okunikeze lolu lwazi futhi ukhuluma no-Josie ngamabhili. Ngokushesha noma ngamuva uzothola isizathu sangempela. Kulokhu, ake sithi uthola ukuthi u-Josie uthatha izifundo ze-accounting kodwa akazi ukuthi angawaphatha kanjani ama-account. Ngenxa yalokho, wayesaba ukukhokha izikweletu aze aqede izifundo. Manje njengoba usuyitholile imbangela efanelekile, kulula kuwe ukuthi usebenzele ukuthi ungayisingatha kanjani. Inkampani empeleni inemali eningi ukukhokha izikweletu futhi lokhu kwenziwa khona lapho, ngenkathi iqinisekisa ukuthi u-Josie uqeda ukuqeqeshwa kwakhe futhi uyazi ukuthi angayenza kanjani i-accounting.
Njengoba wehla ngomkhondo wezinto ongaziqondi, kuzokwenzeka enye yezinto ezimbili. Kuphakathi kokuthi kuyisiphetho esifile (inkambo yokwenza engakhi imiphumela) futhi akuqhubeki phambili, ngaleso sikhathi ubuyela ephuzisweni elingaphambili kophenyo lwakho lapho izinto zase ziqala ukuzwakala, noma imibuzo yakho iphakamisa imininingwane eminingi ewusizo. Futhi uma ikhiqiza imininingwane eminingi, uzothola izinto eziningi ongaziqondi ongazilandela.
Lapho uthola amaqiniso amabili aphikisanayo (ahlukile), ubuza imibuzo ngala maqiniso amabili bese uthola elinye iphuzu ongaliqondi. Uqhubeka kulolu hambo lwezinto ongaziqondi kuze kutholakale isizathu sangempela.
Ukubeka enye indlela ukukunika isithombe esicacile, ikhono lokwenza lolu phenyo lufana nokuthola ucezu lwentambo lunamathele ngaphandle kokuthile—into ongeke uyiqonde, futhi, ngokubuza, udonse intambo. Njengoba udonsa, kuvela ikati elincane. Wena udonsa ngentambo ngokubuza eminye imibuzo bese kuvela ingane ye-gorrilla. Udonsa okunye futhi bese kuvela ihlosi. Manje uyaphinde udonse futhi wow! Uthole ithangi le-General Sherman (ithangi elikhulu elinamandla eliqanjwe ngo-general odumile)! Yilokho obukufuna, isizathu sangempela sobunzima ofuna ukubusombulula.
Uyabona, akwenzi mqondo ukuthi abantu babe ngamavila noma babeyiziwula. Ekujuleni kwenkinga uzothola imbangela yangempela yabantu yokuthi bangathathi sinyathelo enhlanganweni enobunzima noma ngenxa yokucasulwa okuthile okungakaze kubonakale njengokuxazululeka.
Uma unethangi lakho “le-General Sherman,” ungathatha isenzo.
Kuhlala kunesizathu ngemuva kwesibalo esibi noma isimo esibi. Buza imibuzo yalabo abathintekayo uze ube nesizathu sangempela esivelile. Ngeke kuze kube “u-Jane akahlakaniphile.” Kungenzeka kakhulu: U-Jane waqashwa njenge-typist kodwa akakaze akwazi uku-typer. Noma umphathi omkhulu endaweni akezi emsebenzini.
Isizathu sangempela sesibalo esiphansi ngaso sonke isikhathi siyinto engaqondakala kalula. Futhi uma ubuza imibuzo eyanele, uzothola isizathu sangempela bese uthatha isinyathelo esiwusizo.
Le ndlela yokuphenya, yize ilula kakhulu, isebenza kakhulu ngoba ithola imiphumela emihle. Ingasetshenziswa uma ubhekene nezinkinga ezilula noma ezinzima ukuthi uziqonde ukuze uthole isizatho sangempela esibangela zona. Lokhu kukusiza ukuba uzixazulule.
Njengoba wenza uphenyo, amakhono akho azothuthuka. Ungalola amakhono akho futhi uwenze asebenze kakhulu ukuze ukwazi ukubona ngokushesha okuthile ongakuqondi futhi uthathe isenzo. Yize leli khono lingeyona into yemvelo kubantu—abazalwanga nalo—ungalithola kalula lelo khono.
Ukwenza uphenyo lusheshe futhi luphumelele, kufanele ukwazi ukuqonda nokusebenzisa izimiso zokuqonda—isifundo esingazange siqondwe kahle futhi senziwe sadida ngaphandle kwesizathu esithile. Akusenjalo. Esihlokweni esilandelayo uzofunda izisekelo maqondana nengqondo.